အသိသတိ - ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ သဘောကို သိကြည့်ခြင်း
မာတိကာ / ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ သဘောကို သိကြည့်ခြင်း
(၃) လက်သည်း ခြေသည်း
လက်သည်းနဲ့ ခြေသည်းတွေဟာ လက်ချောင်းနဲ့ ခြေချောင်း အဆစ်လေးတွေရဲ့ အဖျားပိုင်း ထိပ်ဆုံး
အဆစ်ကနေ ထွက်လာတယ်။ ပျော့တဲ့ အသားထဲက မာတဲ့အရာ ထွက်လာတယ်။
လက်သည်း ခြေသည်းတွေကို မညှပ်ဘဲထားရင် အရှည်ကြီး ဖြစ်လာတယ်။ လက်သည်း၊ ခြေသည်းတွေရဲ့ ရှင်သန်မှုက လက်ချောင်းထိပ်နဲ့ ခြေချောင်းတွေရဲ့ ထိပ်မှာပဲ ရှိတယ်။ လက်ချောင်း ခြေချောင်းတွေရဲ့ထိပ်မှာ လက်သည်း ခြေသည်းတွေထွက်နေတာ လက်ချောင်း၊ ခြေချောင်းတွေက မသိကြသလို လက်သည်း ခြေသည်းတွေကလည်း လက်ချောင်း ခြေချောင်းထိပ်မှာ ရှိခွင့်ရနေတာ မသိကြပါဘူး။
လက်သည်း ရှည်လာတာတွေ၊ ညှပ်ပစ်တာတွေ၊ အရောင်ဆိုးတာတွေ သူတို့မသိဘူး။
လက်သည်း ခြေသည်း ညှပ်တဲ့အခါမှာ အညှပ်ခံနေရတာ သူတို့မသိဘူး။ ညှပ်တဲ့သူကသာ အသားမညှပ်မိအောင် သတိ ထားနေရတယ်။
အဲဒီ သတိ ဘယ်ကရောက်လာတာလဲ?
လက်သည်း ခြေသည်းတွေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း မထားရင် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တယ် ဆိုတာ ပညာပေး အသိတွေ ပေးကြတယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ရှိခွင့်ရတယ်။
အပေါ်မေးရိုးနဲ့ အောက်မေးရိုး နေရာနှစ်ခုမှာ အပြည့်အစုံဆိုရင် ၃၂ချောင်းရှိတယ်။
ငယ်စဉ်အချိန်မှာ သွားကျိုးရင် သွားအသစ်ပေါက်ပေးတယ်။ ထူးဆန်းတာက ၃၂ချောင်း ပြည့်သွားရင် ထပ် မပေါက်တော့ဘူး။ သွားဆိုတာ လူသား အားလုံးအတွက် မရှိမဖြစ် ပစ္စည်းထဲမှာပါတယ်။
သွားအချင်းချင်း ဘေးချင်းကပ်ပြီး ပေါက်နေကြပေမယ့် တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်း မသိကြဘူး။
မေးရိုးတွေ၊ သွားဖုံးတွေက မသိကြဘူး။ ရှေ့ပိုင်းကသွားတွေဟာ အမြစ်တစ်ခုစီပဲ ရှိတယ်။ အနောက်ဘက် အံသွား အုပ်စုဝင် သွားတွေကတော့ အမြစ်နှစ်ခုစီ ရှိကြတယ်။
သွားတွေဟာ မာပေမယ့် အရိုးအုပ်စုထဲမှာ မပါဘူး။
ပါးစပ်ထဲ ရောက်လာသမျှ ၀ါးရမယ့် အစာဆိုရင် ၀ါးပေးရတာ သွားရဲ့အလုပ်ပဲ။ သွားတွေဟာ သူ့အလုပ်သူ လုပ်နေကြပေမယ့် တော်တန်ရုံအစာရဲ့ အပျော့အမာပေါ်မှာ မူတည်ပြီး မာတဲ့အသား၊ အခဲစတာတွေကိုတော့ အနောက်ဘက်က အံသွားအုပ်စုနဲ့ ၀ါးရမယ်လို့ ဘယ်လိုသိနေတာလဲ?
ပါးစပ်ထဲရောက်လာတဲ့ အစာမှန်သမျှ ပျော့ပျော့ မာမာ ၀ါးပေးနေရတဲ့ သွားတွေဘက်က စာနာစိတ်နဲ့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတာကတော့ ၀ါးပေးရတဲ့ အစာရဲ့ အရသာကို မသိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရသာကို မသိဘဲနဲ့ ၀ါးပေးနေရတဲ့သွားတွေ ကျိုးရင်၊ သွားပိုးစားရင်၊ သွားကိုက်ရင်၊ သွားအနေနဲ့ မသိပေမယ့် သွားနာရှင်ဘက်က သိတဲ့အသိက..
တခြားတစ်ယောက်ကို နားလည်အောင်၊ စာနာမှုရှိလာအောင်၊ မြင်သာထင်သာ ရှိအောင် ပြောပြဖို့ ခက်နေတယ်။
ကိုယ်တိုင်သွားနာမှသာ သွားနာခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်းသဘောကို သိနိုင်တယ်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားကို
သိစရာရှိတာတွေထဲက သိသင့်တာတွေ သိလို့ရအောင် ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ သိကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ အာရုံဘက်ကို ပြောင်းရွှေ့ သိကြည့်လိုက်ရင် …
ဘယ်လို အသိသစ်ကို ရတာမျိုး ဖြစ်သွားမလဲ?